ပန်ဒိုရာ: သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ (၃) အမှတ် (၁)
Posted by pandora at 1:20 AM
ကဗျာက တမျိုး၊ ၀တ္ထုတိုလေးက တမျိုး။
ကဗျာကလဲ ကောင်းပါတယ်။ ၀တ္ထုကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်။ သူနဲ့အတူ အလှပြင်၊ သူနဲ့အတူလိုက်၊ သူနဲ့အတူ မော။ သူနဲ့အတူ ရီလိုက်ရတာ။
January 26, 2009 at 1:51 AM
ရောက်ခဲ့ပါတယ် အစ်မရေ.. ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ကဗျာလေးအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်၊ ကျေနပ်မိပါတယ်ခင်မျ..
January 26, 2009 at 2:01 AM
မိုးချို ပြောသလိုပဲ..ကဗျာထက် ၀တ္ထကို ပို ကြိုက်တယ်..
မင်္ဂလာညချမ်းမှာ က ဘယ်သူ့ စောင်းရေးထားတာပါလိမ့်..
January 26, 2009 at 8:56 AM
တို့လဲ ဝတ္ဘူကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်. ကိုယ်လဲ လုပ်နေကျ..့မနက်မိုးလင်း အလုပ်သွားတဲ့ရထားက တောင်ဘက်...စနေညနေ မြို့ထဲသွားတဲ့ရထားက မြောက်ဘက်.. ခဏခဏ မှားစီးတာ အခါခါ..ရထားဘူတာကျော်သွားတာအခါခါ.MRT လက်မှတ် ပါမလာလို့ထပ်ဝယ်တာ အခါခါ အိမ်မှာ ၄ ကဒ်လောက်ရှိတယ်. ဒါပေမဲ့ဘယ်နားရောက်နေသလဲ မသိ... သွားခါနီးပစည်းပျောက်လို့ ရှာနေတာ အခါခါ..အပြင်ကို တော်တော်နဲ့ မရောက်တာ အခါခါ..အငှားကား ၁၀တန် လမ်း ကို ၁ ၅ကျပ် နဲ့စီးတာ အခါခါ...
(ယောကျာ်းရလိုက်လို့တော်သေးတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး.။ )
January 26, 2009 at 9:31 AM
ဒီလိုဘဲဖြစ်တတ်သလား...နောက်ပြီး..တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်တဲ့ဘ၀ရဲ့ လစ်ဟာမှုတွေရယ် တစုံတယောက်နဲ့ အတူနေထိုင်ရမယ့် ဘ၀ရဲ့ ဖိစီးမှုတွေရယ် ကို ချိန်ထိုးနေရင်းနဲ့ပဲ ဒီအရွယ်တိုင်ခဲ့ပြီလေ..ဆိုတဲ့အတွေး
January 26, 2009 at 11:15 AM
Mhu Darye said...
၀တ္တုလေး သဘောကျတယ် မပန်... ကဗျာလေးကျတော့ တစ်မျိုးကောင်းတယ်။ ^-^
January 26, 2009 at 11:40 AM
မင်္ဂလာဆောင်ကို ရက်မှားသွားမိတဲ့ အဖြစ်နဲ့စာအိပ်အလွတ်ကြီး လက်ဖွဲ့ ပေးမိတဲ့ အဖြစ် ဘယ်ဟာက ပိုဆိုးသလဲလို့အတွေးနယ်ချဲ့ ရင်း...
အပျိုဂျီး တွေလဲ အတော် လွဲတာပါပဲလား?
January 26, 2009 at 10:26 PM
၀တ္ထုလေးကတော့ ကောင်းလွန်းလို့ … မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အချိုးအကွေ့ လေးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေးကို ကြိုက်လိုက်တာ… ဘယ်သူ့ ကို စောင်းရေးထားတာလဲ ပန်ရေ… အနီးစပ်ဆုံး အပျိုကြီးကို သွားမြင်နေမိတယ်…
January 27, 2009 at 12:47 AM
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ..အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ဆို အဲ့သလိုမျိုး အမြဲ ဖြစ်တတ်တယ်.. အဆုံးကျတော့ ရီလိုက်ရတာ
January 27, 2009 at 3:31 AM
ဒေါင်းသွားပြီဗျို့... နောက်တောင်ကျနေတယ်..း)
January 27, 2009 at 6:40 AM
အုတ်ဂူတွေကြား ခေါင်းတလားတွေမှာ ခိုအောင်းလို့
သူတို့ အသက်ဆက်မယ့် အာဟာရ ဆိုတာ
လူရှင်တွေရဲ့ သွေး တဲ့လား
(အင်း.. သူတို့ကလည်း လူမှ မဟုတ်တော့ပဲလေ။)"
ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးဖူးခဲ့ပေမယ့် မပန်ကဗျာလောက် အင်အားမပါသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်.။
ပန်ဒိုရာ စရိုက်နှစ်မျိုးသရုပ်ဆောင် တာကို
January 27, 2009 at 8:59 PM
Yaw Han Aung said...
သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် ကဗျာက မြန်မာမဆန်လှဘူး။ ဥရောပရုပ်ရှင်ဆန်တယ်။
မြန်မာမှာက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ဥစ္စာစောင့်ရှိတယ်။ သူတို့ကို ကြိုက်မိရင် သိုက်နန်းကို ၀ိဉာဉ်နှုတ်ခေါ်သွားရော ဆိုတာမျိုးပေါ့။
အသား အသွေးစားတဲ့ ဘီလူးရှိတယ်။ ဘီလူးကိုက်လို့ ဘီလူးမဖြစ်ဘူး။
ဥရောပမှာတော့ ဗင်ပိုင်းယားလို သွေးစုတ်ခံရလို့ သူတို့ဇာတ်ဝင်သွားသူတွေရှိတယ်။ ကျနော်လိုက်စဉ်းစားကြည့်တာ မြန်မာ့သူရဲတစ္ဆေတွေ မှာ ဗင်ပိုင်းယားလို အကောင်မျိုး မတွေ့ရဘူးဗျ။
ကဗျာက ကောင်းပါတယ်။ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အတွေးနယ်ချဲ့သွားခြင်းသာ....
January 28, 2009 at 6:31 AM
အားလုံးကောင်းတယ်ဗျ ကဗျာလေးကို အပိုကြိုက်တယ် ထိမိတယ်ဗျ
January 28, 2009 at 10:48 PM
အစ်မရေ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ပထမက Theme ကိုတမျိုးတွေး လိုက်မိတာ။ ပထမအပိုဒ်ကိုဖတ်နေတုန်းက။ နောက်ဆုံး ကျမှမှားသွားမှန်းသိလိုက်တယ်။
January 29, 2009 at 12:01 AM
အင်း... မဟုတ်မှလွဲရော... အရင်တုန်းက တအိမ်ထဲအတူနေခဲ့ဘူးသူ အပျိုကြီးကို စောင်းရေးတယ်ထင်ပါ့....း-)
January 29, 2009 at 1:09 PM
"မင်္ဂလာညချမ်းမှာ" ကို သံလွင်အိပ်မက်မှာ သွားဖတ်ပြီးတာ ကြာပြီ..။
ကောမန့်ရေးတော့ မရဘူး၊ သင်္ချာညံ့လို့ထင်တယ်..၊
တကယ်တော့ အဲဒီ word verification ကို သေချာမမြင်ရတာ...။
January 31, 2009 at 11:58 AM
မမိုးချိသင်းရေ.. အပျိုဂျီးတိုင်းလည်း ဒီလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရယ်စရာ နောက်ထားတာပါ။ ဟီး။
ခန်နေ.. ဒီဇိုင်းလေး မလှမပကို ကျေးဇူးတင်လို့ ကျေးဇူးပြန်တင်ပါတယ်။
ကိုမောင်ရင်.. ယုံထင်ကြောင်ထင် မထင်ကြေးလေ။
မခင်ဦးမေ.. ဟုတ်တယ် .. တကယ်က ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တတ်လို့ပါ။
ကိုဆောင်း.. ဒီစာကြောင်းလေးကို မြင်ပြီး ခံစားသွားတာကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျနော်လည်း အဲလိုထင်မိတာပါ။
မှူးဒါရီရေ.. အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါနော်။
မနော်.. ၀တ္ထုကတော့ ၀တ္ထုပေါ့နော်။
ကိုဒူကဘာ.. အပျိုဂျီးမှရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ကြမှာပါ။
မတန်ခူး.. လုပ်ပါနဲ့. ကြောက်ကြောက်. မဆိုလိုပါ။ ဟီး။
မီယာ.. ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးရင်း ရယ်ရပါတယ်။
မိုးမောင်.. အားပေးသွားတာ ကျေးဇူး။
မအိန္ဒြာ .. ကဗျာလေးကို မြင်အောင် ကြည့်သွားတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ အော်စကာ ကိုလည်း သိမ်းထားလိုက်ပါပြီ။
ကိုယော.. ဒီကဗျာထဲက သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်က အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်ဆန်တာ မှန်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ရင်း ရတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ လွှမ်းမိုးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာမှာလည်း ဖုတ် ဆိုတာ ရှိတော့ရှိတယ်ဗျ။ ဖုတ်ဝင်တယ် ဆိုတာရှိတယ်။ အနောက်တိုင်း သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်လို လူတွေကို လိုက်ကိုက်ပြီး သွေးစုတ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူက လူသေသွားတာကို တခြားအပြင်က ၀ိညဉ်တခုက ပူးကပ်ပြီး ဖုတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ သူကလည်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တချို့ဖုတ်က ညဘက် လူခြေတိတ်မှ ထပြီး အစာတွေထစားတာမျိုး။ လူရှေ့ကြရင်တော့ အားနည်း လဲချင်ယောင်ဆောင်နေရောတဲ့။ တချို့ဖုတ် ကျတော့ လူတွေကို နင်းပေးပါ နှိပ်ပေးပါနဲ့ သူတို့ကို ကိုင်တွယ်ခိုင်းတယ်။ ဒါမှ နေရတာ သက်သာတယ်တဲ့။အဲလိုမျိုးကို သွေးစုပ်ဖုတ်လို့ မြန်မာလိုခေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်သွေးကိုစုပ်တာတော့မဟုတ် လူကောင်းတွေဆီက energy ကိုစုပ်ယူတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲလို ဖုတ်ဝင်နေတဲ့ လူမမာ ရှိနေပြီး သူက မသေသေးရင် (ဖုတ်မထွက်ရင်) တခြားသေတဲ့လူတွေ ရပ်ကွက်ထဲမှာ များလာတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အဲလိုဖုတ်က အသားတွေသာ ရိဆွေး ကိုယ်ခန္ဓာ ပုံပျက်လာတယ်။ နှစ်နဲ့ချီပြီး အသက်ကမထွက်နိုင်ဘူးလို့ ဖြစ်တတ်တယ်။ သူထွက်သွားအောင် သြဇာရွက်တွေကို ပြောင်းပြန်ထပ်ပြီး သူ့အိပ်ရာအောက်မှာ ထားရတယ် တဲ့။ ဒါမှမရရင် နောက်ဆုံးအဆင့်က သိမ်ဝင်အပ်တွေဘာတွေနဲ့ ထိုးရတယ် လို့ ပြောကြတယ်။ တခါတလေဆို ဖုတ်လည်းထွက်သွားရော (သေသွားရော) လူအသားတွေက ဆွေးမြေ့ အရည်ထွက်ကျနေပြီတဲ့။ ကိုယ်တိုင် ယုံတာ မယုံတာထက် ဒီလိုမျိုးကို ရွာတွေမှာ ပြောကြတာ ကြုံကြတာကို ကြားဖူးထားလို့ပါ။ ယောဆရာဆိုတော့ ဒီကိစ္စမျိုးတွေ သိထားအောင် လျှာရှည်ပြီး ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ :)
မေ့သမီး.. ကဗျာလေးကို ခံစားသွားတာ ကျေးဇူး။
ကိုပေါ.. တယ်သိနေပါလား။ တိုက်ဆိုင်နေရင် နှုတ်ပိတ်ခံရမယ်နော်။ ဟင်းဟင်း။ (မုန့်ကျွေးပြီး ပိတ်တာကို ပြောတာပါ။)
February 1, 2009 at 12:15 PM
မင်္ဂလာညချမ်းကိုတော့ အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ် အစ်မရေ.. နှစ်သက်ပါတယ် ခင်မျာ.. ဖတ်ပြီးသွားတော့ ဒေါ်လာ၉၀လေးကို နှမျှောမိတယ်..း)
February 22, 2009 at 11:20 AM
မိုခါး(Mocha)..... - ခေါငျးရငျးဘေးနားက ဖုနျးမကျဆသေံ့မွညျလာလို့ နာရီကွညျ့လိုကျတော့မှ မနကျ ၇ နာရီ ၄၅မိနဈရှိပွီ....။ ဖုနျးယူကွညျ့ရငျး ကိုယျတဈခကျြပွုံးလိုကျမိတယျ...။ သူ့ဆီက မ...
ခငျမောငျတိုးရဲ့ ခှနျအားဖွညျ့မိငယျ (ပါဠိversion) - ပါဠိစာတှေ ဖတျရရငျ ပြျောတယျ။ ပါဠိသံတှေ ကွားရရငျ ပြျောတယျ။ ပါဠိစာတှေ ကိုးကားရငျ ပြျောတယျ။ ပါဠိစာလုံးတှေ လူသုံးမြားရငျ ပြျောတယျ။ အပြျောဆုံးက သီခငျြးတှေ ကဗြာတှ...
COVID-19 Has Changed Festival Scene in Yangon - Since the first case of COVID-19 has emerged in late March 2020, the scenes of Myanmar has changed suddenly. Usually […]
မွနျမာ အကွိုကျ မဆလာ ကွိတျနညျး - မွနျမာ အကွိုကျ မဆလာကွိတျနညျး မဆလာဆိုတော့ ဟိုးအရငျ စင်ျကာပူမှာနတေုံးက ကုလားလေး မဆလာသုံးတယျ။ နောကျ အဲဒါ သုံးရငျး ဟငျးခကျြတိုငျး ဒီအနံ့ဆိုတော့ အနံ့က ငွီးငှလေ့...
လင်းခါး - ရေသေအိုင် - အစကနေ အဆုံး လက်ကမချပဲ ဆက်တိုက် ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ အသက်ရှူဖို့ မေ့သွားလိုက်၊ သက်ပြင်းတွေ ချလိုက်၊ ဝမ်းနည်းလိုက်... တစ်ခါတစ်ခါ သဘောတကျ ပြုံးရယ်လိုက်...
ဘဝမွတ္စု - ၈ (ဘဝမှတ်စု - ၈) - ဘဝမှာ ကိုယျ အတေးအမှတျအကွီးဆုံးထားတဲ့အရာက ကိုယျ့ဒဏျရာတှရေဲ့အကွောငျးရငျးပဲ။ ကိုယျ့ကို နညျးနညျးကလေးဖွဈစေ နာကငျြအောငျလုပျရငျတောငျ ကိုယျက မှတျသားထားတတျတယျ။ လက...
Desktop မှာ ယူနီကုဒ် ပြောင်းပြီး Zawgyi ကော၊ Unicode ပါ ဆက်သုံးနည် - ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုဒ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အကြိမ်ကြိမ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အောင်မြင...
- I have been wrong about 2020’s presidential election and I should say so. I had expected that by the end of Super Tuesday (March 3rd this time around), we ...
ဆက်တင် - အိပ်မက်ဆိုတာမျိုးက အဖြူအမည်းနဲ့ပဲ မြင်ရတာ ချောက်နက်ကြီးထဲ ပြုတ်ကျတော့ မျက်လုံးထဲက အဝါရောင်သွေးတွေ ထွက်လာတယ် မနက်ဖြန်ကို ရောက်ဖို့ဆိုတာလည်း အိပ်မပျော်ခြင်း...
အတွေးရုပ်ကြွင်းများ - အစိုးရကိုယ်၌ ကသောင်းကနင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိ ဖြစ်နေလျှင်၊ မကူညီဘဲ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေလျှင်၊ ဦးမဆောင်ဘဲ အမိန့်များသာပေးနေလျှင်၊ဤသို့သော နိုင်ငံတွင် ဥပဒေလု...